Inye kuphela itheko (iindwendwe ezi-1 ukuya kwezi-6) ezibekelwe indawo - I-Airbnb
Inye kuphela itheko (iindwendwe ezi-1 ukuya kwezi-6) ezibekelwe indawo
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguSubrato
I-bungalow yamabali amabini (yetheko leendwendwe elinye kuphela) kwindawo ebiyelwe ngodonga enokhuseleko lwe-24x7, igadi.
Umgangatho wokuqala (i-BR, indawo yokungena, i-terrace, ibalcony kunye nophahla) yenzelwe iindwendwe kuphela (1 ukuya kwisi-4 ngenani). Ibungalow yonke (kubandakanya umgangatho ophantsi BR, & nendlu yangasese) iyafumaneka kwiindwendwe xa inani labo 4 okanye ngaphezulu. Kuphela isethi enye yeendwendwe ezihlaliswayo nangaliphi na ixesha nokuba zingaphi na inani leendwendwe ezibhukisiweyo.
Iqela leendwendwe elinamalungu angamadoda kuphela awamkelwa.
Le yipropathi apho unokonwabela indalo kude nesiphithiphithi sobomi besixeko. Indawo ebiyelwe ngodonga enegadi ehonjisiweyo kunye nengca igcina amakhaya eholide kuphela kwaye inabemi abambalwa kakhulu .
Ukuphuma kumda wesixeko sase-Bolpur le ndawo icoceke ngokupheleleyo nge-ambiance yelali.
Ilali yesizwe ilapha ecaleni kwendawo kwaye iShantiniketan imalunga neekhilomitha ezisi-7.
Yonwabela indalo ukusuka kwigumbi lakho lokulala okanye ibalcony enamabala aluhlaza asolulela elundini.
Izithuthi zikawonke-wonke kunye neendawo zokutyela ezisemgangathweni ziyafumaneka ngokukhawuleza ngaphandle kwendawo.
Indawo yasekhitshini +inkonzo yokuncedisana (8am ukuya ku-4pm) ukulungiselela ukutya iyafumaneka ngentlawulo eyongezelelweyo ye-Rs. 350 ngosuku. Izinto ezisetyenziswayo (ngaphandle kwegesi yokupheka) kufuneka zihlawulwe/ zilungiswe ziindwendwe kwaye okufanayo kuyafumaneka ecaleni kwesango lethu elikhulu.
Isidlo sakusasa (xa singekho indawo yasekhitshini) (sabji +puri+iti eswiti+/ikofi) sibizwa ngeRs. 60 umntu ngamnye.
Ukuhanjiswa kokutya ekhaya kukwafumaneka kwi-restaurent ekufutshane.
4.91 · Izimvo eziyi-92
Kukho ilali yesizwe esecaleni kolu luhlu. Kukho ivenkile yegrosari ebonelela zonke izinto eziyimfuneko zokutya kubandakanya nemifuno eluhlaza.
Igumbi lakho lokulala kunye ne-balcony kumgangatho wokuqala ujongene namasimi avulekileyo e-paddy kungekho nto ithintela umbono wakho.
I-complex ngokwayo ihonjiswe ngengca egcinwe kakuhle, indawo enamanzi kunye ne-bungalow nganye inegadi yayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Subrato
Siya kufumaneka / silungiselele ukukukhokela kwaye sikuncede ukuba ube neholide ekhumbulekayo.